News - Otu esi amata ihe di iche na mmuo iko karama—— Nkịtị Nkịtị ma ọ bụ Super Flint
N'ihi na mmụọ iko kalama, e nwere abụọ dị iche iche ihe na-emepụta na karama, nkịtị nkume, super flint iche iche. E nwere ọtụtụ ihe dị iche n'etiti ha na-enyere gị aka ịmata ọdịiche dị ka ha n'okpuru:
1. Agba nke ihe:
Agba nke iko okwute anaghị achacha ma na-acha ọcha dị ka nnukwu ihe. Imirikiti iko mmiri na-acha uhie uhie ga-enwe ụcha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ihi ọdịnaya dị elu nke ígwè.
2. Ahịa Ngwa
Nkịtị flint ihe eji ala na-eri ihe, nke mere na-bụ-eji maka olu ngwaahịa, ọ bụghị n'ihi na adịchaghị na ngwaahịa. Nghọta nke karama ihe ọintụ superụ dị mma karịa karama akpụkpọ.
3. Ala nke karama karama
Site na imewe echiche, karama nke emere site na okwute nwere ike ịnwe ike dị ala. Ha enweghị ike ime ka mmiri sie ike. Site na imepụta gị, anyị chere na ngwaahịa ndị ị chọrọ bụ ihe adịchaghị elu na akụkụ ala bụ akụkụ, ọ bụ ya mere anyị ji chee na ị ga-eji ihe dị elu.
N'ikpeazụ, ọtụtụ osisi na China nwere ike ịmepụta ọ produceụ nkịtị, ha anaghị emepụta iko dị elu. Fọdụ osisi na-ewepụta iko dị elu, anaghị emepụta iko ọ bụla.
Liquorpac bụ ọkachamara na-eweta ihe ngwọta nkwakọ ngwaahịa, na-enwe ihe karịrị afọ 15 na ahụmịhe omenala na ngwongwo iko dị larịị na mkpuchi karama. Otu ọhụụ, nke gunyere injinia na onye mmebe, na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ahịa na mmepụta.
Liquorpac bụ ezi onye nkwụsị - soplaya maka ihe ngwọta kalama na mmechi. Ọrụ anyị na-aga nke ọma ịhazi nkwakọ ngwaahịa niile iji chịkwaa ihe egwu na ịchekwa oge nke ndị ahịa.